Compton, onye na - eme ihe fechaa ị ga - anwale | Site na Linux
Ndị mụ na ha na-akparịta ụka na IRC, ha maara na m na-akwado nke fechaa desks. Ana m etinye ya n'ime Xfce, Lxde, Openbox na ọbụna nwunye, ebe ọ bụ na gburugburu ndị ọzọ dịka Gnome / pawuda y KDE ha dị nnọọ arọ maka PC m pere mpe.
N'otu aka ahụ, ana m atụrụ ndụ na-ahazi tebụl dị otú a na ịgbakọta ha ngwa ngwa na-enye m ohere ịnweta sistemụ zuru oke dịka o kwere mee na obere oriri.
Ogologo oge gara aga enyi anyị Obinwanne 86 gwa anyi banyere Crunchbang 11, nke gunyere otu onye edere aha ya Compton, nke m na-anwale na nke m ga-ekwu banyere taa.
Iji malite, Compton bụ onye na-ede ọkụdị ka e kwuru na mbụ) nke a gụnyere crunchbang. Onye na-ede egwú a bụ ndụdụ de xcompmr-dana, nke n'aka nke ya bụ ndụdụ nke mmmmmmmmmmmmm. Site na nke a ị nweelarịrị echiche otu ọkụ si dị, mana m ga-agwa gị: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhọrọ niile ọ rụọ ọrụ, oriri ya bụ 2MB. Akwa, ị naghị eche? 🙂
Iji gosipụta ya, anyị aghaghị budata ya site na peeji nke gi gaa y chikọta ya. Ha ndị dabere bụ otu ihe ahụ dị mkpa iji kpokọta mmmmmmmmmmmmm. M tinyere ha ebe a:
xprop, xwininfo / x11-ngwa.
Rịba ama maka Debian na nkwekọrịta: ka libs tinye «-ihe" na njedebe. Ọmụmaatụ: libx11-dev.
Anyị na-etinye gaa anyị na-emekwa (na njedebe):
Nke ahụ ga-ebudata koodu compton na folda anyị nọ na njedebe. Mgbe ahụ, anyị na-emezu:
Na anyị ga-enwe Compton arụnyere. Compton na-egbu site ọnụ, na anyị nwere ike ịmata na Nhọrọ dị con nwoke compton. Agbanyeghị dịka nkwanye ugwu, ana m ahapụrụ gị ụfọdụ atụ:
compton -c : ụdị kachasị mkpa nke mejupụtara. Mejupụtara ọkọlọtọ na ndò na windo, ogwe na ọdụ ụgbọ mmiri (predefined ụkpụrụ).
compton -cCGb : mejupụtara na onyinyo na windo, na-egbochi ha ịpụta na ogwe na ọdụ ụgbọ mmiri, na dọrọ na dobe windo.
compton -r 12.0 -o 0.75 -l -15.0 -t -15.0 -I 0.028 -O 0.03 -D 3 -c -f -C -F -G : nke a bụ ọkara ogologo xD Ọ bụ nke m na-eji. Nwere ndo nke na-adịghị ere ọkụ na ogwe na ọdụ ụgbọ mmiri, ihe ngosi «Fjụ-na-esi»de window, dị ka menus.
Ọfọn na nke ikpeazụ Mbido m desktọọpụ dị ka nke a:
My Debian Xfce na nhazi aha.
My Arch LXDE na nhazi otu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nsonaazụ ya bụ ezigbo na-eju afọ. Mmetụta dị mma na oriri na-ebelata, yana na tebụl na ụfọdụ ga-eru eru dị ka ogbenye ma e jiri ya tụnyere Gnome o KDE.
1 Gbakwunye Compton na mmalite desktọọpụ
2 Extra: Gcompton, ihe eserese eserese maka Compton
Gbakwunye Compton na mmalite desktọọpụ
N'ezie anyị achọghị iji aka rụọ ọrụ ihe mejupụtara 😛 Yabụ anyị kwesịrị ịkọwa otu esi etinye Compton na mbido akpaka nke desktọọpụ ụfọdụ.
Xfce: anyị na-aga Nhazi njikwa »Oge na mmalite» Ngwa autostart »Tinye ma anyị tinye iwu ahụ na nhọrọ nke mmasị anyị.
LXDE: anyị dezie faịlụ / wdg / xdg / lxsession / LXDE / autostart anyị tinye «@»Soro iwu na nhọrọ anyị chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, nke dị na Arch LXDE m nwere nke a:
[koodu] @lxpanel –nkọwapụta LXDE
@pcmanfm –desktop –profaịlụ LXDE
@ / usr / bin / numlockx na
Oghere: maka Openbox, anyị ga-edozi faịlụ ahụ ~ / .config / oghe / autostart (Ọ bụrụ na ọ dịghị, anyị kere ya) ma gbakwunye iwu na nhọrọ na njedebe, sotere "&" (ọkacha mma). Ọmụmaatụ:
Ndị a bụ naanị ihe atụ, ịnwere ike ịnwale desktọọpụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị njikwa windo. Ma ọ bụrụ na ha chọrọ kee ya nhazi gị, nweere onwe gị ide ya anyị mado, ma hapụ ya na ikwu 😉
Extra: Gcompton, ihe eserese eserese maka Compton
Ọfọn, ọ na-eme na onye anyị hụrụ n'anya Ha bụ Njikọ, na-arụ ọrụ na a Eserese eserese na Comptonkpọọ Nkọwa. Edere ya n'ime Python y GTK. Site na ya anyị nwere ike ịhazigharị ihe niile paramita de Compton nakwa bido ya, kwụsị ya y Malitegharịa ekwentị ya. Ma ọ bụrụ na anyị pịa bọtịnụ «Tinye na nnọkọ init«, Ga-enye anyị iwu na anyị nwere ike ịgbakwunye na mmalite nke desktọọpụ anyị. O doro anya na ọ bara ezigbo uru maka ndị na-ahọrọ GUI kama ịnwe ọnụ.
Gcompton dị na Nwa Link Github, ya na ndi oru ya. Iji wụnye ya, na ọnụ anyị na-eme:
git mmepụta oyiri git: //github.com/son-link/gcompton.git
Mgbe ahụ, anyị ga-abanye na folda ahụ ma mee faịlụ ahụ mmmmmmmmmmmmm. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bidoghị ha, dezie faịlụ ahụ ma chọọ "Gcompton.glade", ma gbanwee ya n'ụzọ zuru ezu na ya. Ọmụmaatụ, «/ Omelọ/user/gcompton/gcompton.glade», ebe onye ọrụ bụ onye ọrụ gị (doro anya…).
Ya mere, olee maka Compton? Na-eji ihe ọ bụla ọzọ na-ede ihe na windo? Ma obu ikekwe, ha adighi eji ndi oru? Okwu, abum nti nile ears
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Compton, onye na-ede ihe dị fechaa ị ga-anwale
Ezigbo onyinye, maka ọtụtụ ndị na-amaghị d xd, etinyego m ya oge, dịka izu 2 na eziokwu dị oke ọsọ ma e jiri ya tụnyere xcompmgr
Ee, eziokwu: xcompmgr emeghị ka m kwenye (dị mfe), na Cairo Composite ... Ọfọn, nye 50MB maka onye na-ede akwụkwọ? OO Obughi na m nwere ezigbo PC ... Compton bu nzoputa. Ọ bụ naanị ihe m chọrọ 😀
ọ bụ ya mere m ji kwụsị iji onye dere xd, ọ bụ ihe anyị niile na-achọ maka onye edemede * - *
Nsogbu dị na Cairo-compmgr anyị niile maara ihe ọ bụ, ọ bụkwa mgbe anyị mepere submenus na bọtịnụ ziri ezi. 50Mb abụghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ihe Compiz ji mee ihe atụ (ọ masịrị m mgbe ọ ka bụ Beryl)
Fuck echetaghị m Beryl ... kedu oge 😀
N'ezie ee! Dị nnọọ manụ banyere nri pịa 🙁
Na ncheta zuru oke ma na -eme ya site na ederede magburu onwe ya !!! Daalụ maka nkwanye ahụ, m ga-anwale ya ozugbo
Ọfọn, ọ bụrụ na m nwere oge taa m gaara eme onye ọzọ ... Mana m ji gị ụgwọ maka izu a 😉
Daalụ AurosZx, nnukwu ihe. Aga m anwa ịwụnye ya ma nwalee ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa Xfce Composer, nke ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, jiri xcompmgr. 😀
Naanị m tinye Compton ma gbaa ọsọ na ntọala gị. M hụrụ n'anya na smoothing nke mmetụta na ikwu itions
Ee, ọ bụ ihe kasị mma 😀 Ọ na-enye a aka nke «anwansi» ka ìhè tebụl ...
Ezigbo ozi, ozi magburu onwe ya, zuru oke, ugbu a ọ nweghị onye nwere ngọpụ ka ọ ghara ịnwale ya.
ma ọ bụrụ na m nwere oge ụbọchị ndị a, M na-agbalị njiko na m ga-nnwale na Openbox a andiwet !!! Daalụ maka ozi ahụ
Na-ekwu maka IRC. Ọ ga-adị mfe inweta ya. O nweghi ike ịbụ na m ga-aga ebe o kwuru sị "chọọ" chọọ ya.
Zaghachi na spanishbizarro
Yup, anyị ga-edozi nke a n'isiokwu ọhụrụ, Echere m na ọ na-eme ntakịrị echiche iji melite nke a mgbe nke ọhụrụ fọrọ nke nta ka 80% dị njikere 🙂
Achọburu m ịchọ ịhụ isiokwu ọhụrụ ahụ 🙂 A ga - enwe mgbanwe ole na ole (ma ọ bụ ndozi efu) maka isiokwu mkpanaka ahụ? Ọ dịghị mkpa, mana ọ ga-adị mma. Enwere m ike ịnyere gị aka ịnwale ya ma ị chọọ.
Ọfọn, ihe ahụ bụ eziokwu. Maka ugbu a, anyị ga-eme ka isiokwu PC dị ka okike dị ka o kwere mee. Site na enyemaka gị, a ga-edozi nchinchi ga-ekwe omume ma tinyekwa ndozi. Mgbe ihe niile dị 100%, anyị na-elekwasị anya na isiokwu mkpanaka, n'ihi na ụdị isiokwu a nwere njirimara ya ma eleghị anya anyị ga-etinye ya iche iche, ya bụ, ihe dịka m.desdelinux.net 😀
Banyere ihe ikpeazụ ị kwuru, ee nke ahụ bụ ihe kachasị mma.
Otu ihe anyị ga - eme ma ọ bụrụ na achọpụtara na ọ sitere na ekwentị, mgbe ị na - abanye na blog ọ na - ebute ya na ntanetị ọzọ na - akpaghị aka.
Ka anyi nwee olile anya na ubochi nke iteghete edozie ya, o gha bu ihe mgbagwoju anya
Iji wụnye ya na Xubuntu ị ga-ebu ụzọ wepu xcompmgr?
Ọ bụghị ma ọlị, ị ga-gbanyụọ onye na-ede Xfce ma ọ bụrụ na enyere ya aka.
Magburu onwe: D ...
Ugbu a na m nọ na lxde na metacity na Debian Wheezy na amaghị m etu esi arụ ọrụ mejupụtara mejupụtara, mana m masịrị ngwọta a.
Site n'ụzọ maka ndị na-anwale Gcompton dezie faịlụ na na mmalite ebe o si abịa
#! / usr / bin / env python2 ịgbanwee gaa na eke
Ọ mere m ka m kwuo ya na AurosZx. Nke a bụ n'ihi na na Archlinux ọ ga-akpọ Python 3
Kedu ihe osise onyinyo mara mma, nke jọgburu onwe ya enweghị m ike ịchịkọta ya = (
Gbalịa itinye nke mbụ:
aptitude wụnye ewu-mkpa gcc
Mgbe ahụ mee ... dị ka isiokwu ahụ na-ekwu. Ọ bụrụ na ọgaghị, ị lọta ebe a anyị na-ele ya anya
Site n'ụzọ, Abụ m onye ọrụ Debian, ọ bụghị onye ọrụ Mac ka ọnụ ụzọ ahụ achọpụtala 😀 (ịmata ihe)
Mepee isiokwu na nnọkọ na-ekwu okwu na-akọwa ihe kpatara na ọ naghị achịkọta ma anyị gbalịrị inyere gị aka ^^
Kedu njehie ị nwetara? Na ... anabata gị na saịtị 😀
Ọ na-enye m njehie a:
Achọghị ngwugwu x11 na ụzọ nchọta pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ ndekọ nke nwere `` x11.pc ''
nye mgbanwe PKG_CONFIG_PATH gburugburu ebe obibi
Enweghị ngwugwu 'x11 ′ hụrụ
Ahụghị ngwugwu xcomposite na ụzọ nchọgharị pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ ndekọ nke nwere `` xcomposite.pc ''
Enweghị ngwugwu 'xcomposite' achọtara
Ahụghị ngwugwu xfixes n'ụzọ ụzọ pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ nke nwere `` xfixes.pc ''
Enweghị ngwungwu 'xfixes' achọtara
Ahụghị ngwugwu xdamage na ụzọ nchọgharị pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ ndekọ nke nwere `` xdamage.pc ''
Enweghị ngwungwu 'xdamage' hụrụ
Ahụghị ngwugwu xrender na ụzọ nchọgharị pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ ndekọ nke nwere `` xrender.pc ''
Enweghị ngwungwu 'xrender' ahụ
Na faịlụ gụnyere site src / compton.c: 11: 0:
src / compton.h: 17: 22: njehie na-egbu egbu: X11 / Xlib.h: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
mee: *** [compton.o] Njehie 1
[/ isi iyi]
Anyị na-arụrịta ụka banyere okwu ebe a 😀
Enwere m ike ịme ya mana ana m ekele gị agbanyeghị !!
M hụrụ n'anya otú compton si eche, ma e wezụga ịbụ kpọmkwem ọ bụ ìhè ~
Ezi post. M na-ekwu okwu n'oge na-adịbeghị anya na ọ kwadoro m onye na-ede egwú a, mana ebe ọ na-abịaghị na ngwugwu Debian, enwere m olileanya ịnweta oge m ga-eji mụọ ya, yabụ post a dịịrị m mma. Ezigbo oge.
Ndewo, olee maka mmadụ arụnyere gnome 3 n’ụbọchị ikpeazụ ndị a! n'ihi na sistemụ ahụ amaliteghị m ma ọlị, naanị ihuenyo ojii nwere pointer na-anọgide ma ọ naghị amalite ọbụna na Startx: S
Ndewo enyi n'oge m na-etinye anam, zitere m njehie a, m ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka
mgbọrọgwụ @ vero-pc: / ụlọ / vero / c / compton # mee
mee: cc: Achọtaghị mmemme ahụ
mee: *** [compton.o] Njehie 127
Zaghachi oke ehi
Hụ ma ị wụnye ngwugwu ahụ gcc
Ndewo, enwere m Lubuntu 12.04 ma m gbalịa ịwụnye onye na-ede abụ a, mana enwere m njehie a na usoro a:
Ahụghị ngwugwu libconfig na ụzọ nchọgharị pkg-config.
Ikekwe ị kwesịrị ịgbakwunye ndekọ nke nwere `` libconfig.pc ''
Enweghị ngwungwu 'libconfig' hụrụ
make: pcre-config: Mmemme ahụghị
src / compton.h: 51: 18: njehie na-egbu: pcre.h: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ ahụ adịghị adị
(Mara: tinyeworị ihe dị mkpa gcc, ndị ịdabere na post ahụ belụsọ "xproto / x11proto na
xprop, xwininfo / x11-utils »n'ihi na achọtara m ha na ebe nchekwa m. Etinyego m nchịkọta x11proto niile nke mechara na -dev)
Na nke a ka m nwee ike iji rụọ ọrụ Lubuntu nke ọma Cairo Dock, ekele.
PS: faịlị m ji wụnye Compton agafeela ebe a:
Zaghachi ka eeedmund000
Ekele m, a na m agunyekarị xcompmgr-compton na distros niile m tinyere, mana na laptọọpụ ọ na-ewe nnukwu ume, mgbe o gbusịrị ya, batrị na-anọ ogologo oge, ugbu a, anọ m n'ụlọ ndụdụ na obere nri.
Onyunyo na uzo dị mma nke ukwuu, ọ bụ otu ihe ahụ dere ka m na-eji, ekele na ekele:]
Onwuka Malkavian dijo
daalụ, m na-achọ etu esi tinye ya na autostar na Manjaro na Openbox 🙂
ugbu a iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ XD
Enwere m ahịrị a
compton ~ / .config / compton.conf & Nkọwa
ma tinye nke a
compton -cCGf & Nkọwa
ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị ịmara 🙂 ekele niile
Zaghachi na DevNull Malkavian
Ọfọn, ọ bịara na m dị ọhụrụ na Linux, enwere m Lubuntu (ya na LXDE) ma tinyekwa compton, m wụnye ya na njikwa ngwugwu, nke bụ eziokwu bụ na ọ naghị arụ ọrụ m, edere m koodu ndị ahụ nyere m na ọ nweghị ihe ọ bụla, enwere m ya iji bido koodu ọzọ ma ọ nweghị ihe ọ bụla dịka ọmụmaatụ nke a nyefere m site na ibe weebụ compton -c -r 16 -l -24 -t - 12 -G -b
Enwerem ya dị ka ihe ndabara njikwa ihe mejupụtara, anaghị m ekwu eziokwu ihe m ga - eme xD
Zaghachi Yoglis Fernández
Ọkụ na ebule ma rie 79% nke cpu m
Zaghachi Andrés R
Latex, ide ihe na klas (akụkụ 2)
Firefox Mobile OS: ihe ozo na gam akporo ga aputa na 2013